SellerSmile: Nahoana ianao no tokony hivoaka ny ekipa mpanohana ny Ecommerce | Martech Zone
SellerSmile: Nahoana ianao no tokony hivoaka ny ekipa mpanohana ny E-commerce anao
Talata, Novambra 2, 2021 Talata, Novambra 2, 2021 Douglas Karr
Rehefa namely ny areti-mifindra ary nakatona ny mpivarotra dia tsy nisy fiantraikany tamin'ny fivarotana antsinjarany fotsiny izany. Nisy fiantraikany tamin'ny rojo famatsiana manontolo izay namahana ireo mpivarotra ireo ihany koa izany. ny orinasa consulting digital transformation dia miara-miasa amin'ny mpanamboatra amin'izao fotoana izao mba hanampy azy ireo amin'ny fananganana ny Ecommerce sy Martech stack hanohanana a orinasa dropshipping mivantana amin'ny mpanjifa. Tetikasa sarotra izany satria afaka niasa hatrany amin'ny fikarohana sy ny famoronana marika izahay, ka hatramin'ny fampidirana lozistika.
Tsy mora ny fidirana amin'ny marika vaovao amin'ity indostria ity. Nanoro hevitra azy ireo izahay fa tsy maintsy manana paikady ambony vitsivitsy izy ireo:
Products – izany no fanavahana azy ireo hatramin'ny namolavolany sy nanamboatra lamaody nandritra ny am-polony taona maro. Efa fantatr'izy ireo izay mivarotra ary koa ny andalana manaraka mila avoaka.
User Experience – fantatray fa ny fampiharana ny e-varotra dia tsy maintsy ho ny tsara indrindra, noho izany dia nametraka ny tranokala izahay ShopifyPlus ary nampiasa tohana tsara sy optimized Shopify lohahevitra miasa avy.
Fandefasana sy famerenana - Ny fandefasana maimaim-poana dia tsara, fa ny fananana kitapom-bola efa vonona ho an'ny entana iray mila averina dia zava-dehibe.
Serivisy ho an'ny mpanjifa - farany, fa tsy ny kely indrindra, ny fananana ekipa mpanohana hanara-maso ny mailaka, ny telefaona, ary ny haino aman-jery sosialy mba handaminana ny zavatra ho an'ny mpanjifa dia ho fanakianana.
Ity mpanjifa ity dia tsy manana marika voafaritra, ka ny tsirairay amin'ireo paikady ireo dia tsy maintsy atomboka amin'ny fotoana iray ihany. Tena tsotra izany ho an'ny vokatra, traikefa ary fandefasana… fa ahoana no fomba hanombohanao ekipa serivisy mpanjifa? Eny ary, tokony ho outsource marina ianao.
Nahoana no Outsourced Support?
Ny ekipa mpanohana avy any ivelany dia manana traikefa tsy mampino izay hanampy ny marikao. Ny tombony amin'ny outsourcing ny ekipanao dia ahitana:
Ahena ny fandaniana amin'ny fandraisana mpiasa na ekipan'ny VA. Vidin'ny flexible sy namboarina manokana. Tsy misy adidy, tsy misy sara miafina.
Fandrakofana tsy misy ahiahy fito andro isan-kerinandro. Fidirana amina ekipa manam-pahaizana manokana momba ny serivisy mpanjifa tsy mila manakarama, manofana ary mitantana.
Ampitomboy ny varotrao miaraka amin'ny paikadin'ny traikefan'ny mpanjifa feno ampahafantarina amin'ny angona avy amin'ny valin'ny mpanjifa.
Ny mpanjifanao dia hahazo traikefa miantsena an-tserasera tsara indrindra avy amin'ny ekipa amin'ny fiteny maro miaraka amin'ny fitsipi-pitenenana miavaka sy ny fotoana famaliana haingana.
SellerSmile dia mpitarika amin'ny indostrian'ny fanohanana ecommerce outsourced. Izy ireo dia mpiara-miombon'antoka amin'ny Shopify ary manohana ny tsena ao anatin'izany ny Amazon, Overstock, Etsy, Ebay, Sears, Walmart, ary Newegg. Ny fanohanana voalohany dia ahitana:
Email Support - Na 7 andro isan-kerinandro, faran'ny herinandro na fialan-tsasatra no ilain'ny fandrakofanao, ny SellerSmile dia manome ny fanohanan'ny mpanjifanao amin'ny tsena e-varotra sy fivarotana tranonkala rehetra.
Reputation Management - Ny fanehoan-kevitra sy fanehoan-kevitra ratsy ho an'ny daholobe dia ampahany mahazatra amin'ny fanaovana raharaham-barotra amin'ny Internet fa ny fanehoan-kevitra mitsikera tsy voakarakara dia mety hiparitaka haingana. Ny serivisy fitantanana ny lazan'izy ireo dia miantoka ny fitantanana ny valin-teninao amin'ny marika.
Live Chat Support - Ny fanolorana fanohanana mivantana amin'ny chat ho an'ny mpitsidika tranokalanao dia tombony lehibe amin'ny fifaninanana izay mamehy ny elanelana ary manorina fifampitokisana eo aminao sy ny mpihaino anao amin'ny alàlan'ny fanampiana haingana sy mahomby avy amin'ireo manam-pahaizana momba ny serivisy.
Ankoatra izany, SmellerSmile afaka manome:
Tatitra sy fakan-kevitra - Fiantsoana tatitra isam-bolana sy paikady tsindraindray miaraka amin'ny mpitantana ny kaontinao mba hamerenana ny hevi-dehibe, ny zavatra azo alaina ary ny fahitana azo atao.
Customer Service Consulting – Te hanatsara ny ekipa mpanohana anao? Miara-miasa ny SellerSmile handinika ny fanamboaranao, ny antontan-taratasy ary ny politikanao efa misy ary mamolavola drafitra hahombiazana.
Fanohanana ny Media Sosialy - Fitantanana vondrom-piarahamonina mba hanomezana traikefa tsy misy fotony amin'ny mpiantsena amin'ny Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn sy ny maro hafa.
FAQ Fitantanana - Ataovy mora ny fitadiavana valiny marina amin'ny Fanontaniana Apetraka haingana. Ny tobim-pahalalana ho an'ny besinimaro manokan-tena no handehanan'ny mpanjifa voalohany hahita ny fanampiana ilainy.
Famerenana tatitra - Ny SellerSmile dia afaka manasokajy tanana ny hevitrao momba ny vokatrao isan'andro mba hanehoana ireo fotoana manan-danja amin'ny famerenana ny vokatra sy knowledgebase fanampiny.
Raha te-hanao fanohanan'ny mpanjifa ianao mba hitondra traikefa mpanjifa tsara kokoa sy fivarotana bebe kokoa:
Andramo ny SellerSmile maimaim-poana mandritra ny 7 andro
Fampahafantarana: Mampiasa ny rohy fiarahanay izahay SellerSmile ao amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: fanohanana amazonfitadiavana mpanjifampanjifa fanohananafanohanana mailaka e-varotrafanohanana ecommercefanohanana mailakaFanohanana EtsyFanohanana Neweggfanohanana ecommerce outsourcefanohanana avy any ivelanyfitantanana lazasellersmileshopifyShopify plus fanohananaFanohanana ShopifyLohahevitra Shopifyvarotra sosialyserivisy ho an'ny mpanjifa media sosialyecommerce media sosialyfitantanana media sosialyfitantanana lazan'ny haino aman-jery sosialythemeforestFanohanana Walmartwokiee
Rahoviana ny fikarohana, ny fanaraha-maso, ary ny fialana amin'ny backlinks hanatsarana ny laharan'ny fikarohana